Akhriso: Golaha Aqalka Sare oo kulan yeeshay – Bandhiga
Akhriso: Golaha Aqalka Sare oo kulan yeeshay
Golaha Aqalka sare oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen Hindise-sharciyeedka la dagaalanka musuq- maasuqa,waxaana goobjoog ahaa Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Waxaa shirka gudoominayay Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi C/llaahi waxaana Qaar ka mid ah senatarada oo aragtidooda ka dhiibtay hindise-Sharciyeedka la dagaalanka musuq-maasuqa ayaa sheegay in qodobada qaar muhiim tahay in wax ka badel lagu sameeyo.
Guddoomiyaha Guddiga Garsoorka, Owqaafta ,Xuquuqul Insaanka , Haweenka iyo Carruurta Golaha Aqalka sare Senator Samsam Ibraahin oo qodobada qaar jawaab ka bixisay ayaa sheegtay in fikradaha ay senatarada soo jeediyeen la tixgelin doono.
Wasiirka Cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa uga mahad celiyay Guddiga Garsoorka Golaha Aqalka sare sida ay uga shaqeeyeen Hindise-sharciyeedka iyo fikradaha nadiifka ah ee senatarada soo jeedinayeen.
Hindise-sharciyeedka la dagaalanka musuq-maasuqa ayaa waxaa soo gudbiyay Wasaaradda cadaaladda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya,iyadoo horay ay u soo ansixiyeen Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya.
Somaliland oo waqti kooban u qabatay inuu dhulkeeda kaga baxo wiil Calanka Soomaaliya ku soo dhex bandhigay Haregysa
Xukun lagu riday Rag loo haysto weerarkii Xabsiga Dhexe.
Booliska Soomaaliya ma sugi karaan amniga magaalooyinka loo asteeyay doorashooyinka soo socda?